साढे १४ लाख पशु लाभान्वित – Newsagro
December 15, 2015 December 16, 2015 NewsAgro0Comments Agriculture, Dhadhing, Dr. Shuv sanker Mahato, gorkha, JONAA Nepal Agricultural Journalists Academy Kathmandu, kathmandu, kavre, livestock, Nepal, Newsagro.com, Nuwakot, Sindhupalchauk, हेफर इन्टरनेशनल नेपाल Heifer International Nepal
काठमाडौं, २९ मंसिर/ हेफर इन्टरनेशनलले आयोजना गरिएको ‘पशु सेवा प्रणाली पुनस्थापना’ परियोजनामार्फत गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका ९० वटा भुकम्प प्रभावित गाबिसका किसानको घरदैलोमा पुगेर भुकम्पमा परेर घाइते भएका दुई लाख ३४ हजार पशुको स्वास्थ्य उपचार गरेको छ ।
गत बैशाखमा आएको महाविनाशकारी भुकम्पमा परी पीडित बनेका पाँच जिल्लाका दुई लाख ३४ हजार कृषिजन्य पशुको उपचार गरिएको हो । हेफर इन्टरनेशनलले युएस एड र सरकारको सहकार्यमा ‘पशु सेवा प्रणाली पुनस्थापना’ परियोजना सञ्चालनमा ल्याएको थियो । यसैगरी पाँच वटा जिल्लामा स्थापना गरिएको ५० वटा पशु स्वास्थ्य शिविरमार्फत थप ६५ हजार पशुको उपचार गरिएको थियो ।
चार महिनाको लागि सञ्चालनमा आएको पशु सेवा प्रणाली पुर्नस्थापना परियोजनाको मंगलबार राजधानीमा समापन गर्दै हेफर इन्टरनेशनलका राष्ट्रिय निर्देशक डा. शुभनारायण महतोले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनकाअनुसार उक्त परियोजनामार्फत कूल १४ लाख ४० हजार पशुहरुको विभिन्न प्रकारको स्वास्थोपचार गरिएको थियो । भुकम्पमा परेका सर्वसाधारणलाई स्वास्थोपचार र राहत वितरणमा विभिन्न क्षेत्रले चासो देखाएपनि सोही भुकम्पमा परेर घाइते भएका पशुको उद्दार तथा मरेका पशुको व्यवस्थापन गर्न कुनै क्षेत्रले चासो नदेखाएको अवस्थामा हेफर इन्टरनेशनलले गत असार २८ गतेदेखि यो परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । परियोजनामार्फत घाइते पशुधनको उद्दार गरी उपचार तथा पुर्नस्थापनाका कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । यसैगरी मरेका पशुधनलाई सुरक्षित रुपमा व्यवस्थापन गरिएको थियो ।
युएस एड र हेफर इन्टरनेशनलले परियोजनाका लागि नौं करोड ४८ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । गोठ विहिन बनेका पशुहरुका लागि परियोजनामार्फत एक हजार तीनसय ५० वटा आधुनिक भुकम्प प्रतिरोधी गोठसमेत निर्माण गरिदिएको छ । यो गोठबाट ६ हजार पाँच सय गाईभैसी र बंगुर लाभान्वित भएका छन् । परियोजनाले पशु प्रजननका लागि एक सय ३० वटा राँगा र ४३ जोडी साँढे पनि उपलब्ध गराएको छ ।
यस्तै पाँच वटा जिल्लामा पाँच हजार ६ सय किलो घाँसको बीउ र ६ लाख ५४ हजार बेर्ना पनि रोपेको जानकारी दिइएको छ । परियोजना समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेयले पशुधन ग्रामिण किसानको प्रमुख आयस्रोत भएकाले सरकारले पशु धनको स्वास्थोपचारको लागि आवश्यक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए ।
पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. केशवप्रसाद प्रेमीले साना किसानको कूल आम्दानीको स्रोतमध्ये ३६ प्रतिशत पशुधन भएको जानकारी दिए । उनकाअनुसार भुकम्पमा परेर कूल ८५ हजार ७८ वटा पशुधनको मृत्यु भएको थियो । जसअनुसार सिन्धुपाल्चोकमा २७ हजार एक सय ९८, धादिङमा २२ हजार दुई सय ९२, नुवाकोटमा १९ हजार चार सय ९७, गोरखामा १० हजार सात सय ८० र काभ्रेमा पाँच हजार तीन सय ११ पशुपन्छी(गाई, भैंसी, बाख्रा, खसी, भेडा, बंगुर, कुखुरा, हाँस) नष्ट भएको थियो । यसमध्ये बाख्रा ६.८० प्रतिशत, वंगुर ४.९० प्रतिशत, भैसी २.८० प्रतिशत, गाई २.१० प्रतिशत र भेडा ०.६० प्रतिशत नष्ट भएका थिए ।
← कृषिको पकेट क्षेत्रमा मात्रै अनुदान
अनुदानको मलमा अनियमिता →